कतै प्रेसर कुकर यसरी प्रयोग त गरिरहनु भएको छैन ? सावधान – .:: Welcome to Saurahaonline.com
कतै प्रेसर कुकर यसरी प्रयोग त गरिरहनु भएको छैन ? सावधान
भान्सामा दैनिक जसो केहि न केहि खाने कुराहरु पकाउने गरिन्छ। त्यसमा धेरै प्रयोगमा आउने भाडाको रुपमा प्रेसर कुकरलाई छिटो र चिरो र मिठो पकाउनको लागि प्रेसर कुकर निकै उपयोगी पनि हुन्छ । यससँगै प्रेसर कुकरमा खाना पकाउनुको अर्को फाइदा भनेको, कुनैपनि खानेकुराको पौष्टिक गुण कायम रहन्छ । यद्यपी यो सधै सुरक्षित भने हुँदैन । प्रेसर कुकर विस्फोट हुने संभावना पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग गर्दा धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।
कसरी बन्द गर्ने रु